GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Nigerian Pidgin Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
Mba, ọ bụghị ihe ịmụ mmadụ ọzọ pụtara. Jizọs kọwaara ya ihe ọ pụtara. Ọ sịrị ya: “Ọ bụrụ na a mụghị mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ pụghị ịbanye n’alaeze Chineke.” (Jọn 3:5) Ọ bụ mgbe e mechara Jizọs baptizim, mmụọ nsọ adakwasịkwa ya, ka a mụrụ ya “site na mmiri na mmụọ nsọ.” Mgbe ihe a mere, e nwere olu si n’eluigwe kwuo, sị: “Onye a bụ Ọkpara m, onye m hụrụ n’anya, onye ihe ya masịrị m.” (Matiu 3:16, 17) Chineke si otú a mee ka a mara na ya ezitela Jizọs dị ka nwa ime mmụọ nke nwere olileanya ịba n’Alaeze eluigwe. Ka oge na-aga, na Pentikọst afọ 33, a ga-awụsa ndị ọzọ e mere baptizim mmụọ nsọ, si otú ahụ mụọ ha ọzọ, ha aghọzie ụmụ ime mmụọ Chineke.—Ọrụ Ndịozi 2:1-4.